Maraykanka oo War ka soo saaray Xaallada dalka Sudan - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Maraykanka oo War ka soo saaray Xaallada dalka Sudan
Dowladda Maraykanka waxay Maanta sheegtay inay aad uga walaacsan yihiin Wararka sheegayo inuu Milliteriga la wareegay Talada dalka Sudan.
Ergayga Khaaska ee Maraykanka ugu qaabilsan Arrimaha Geeska Afrika, Jeffrey Feltman ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin in Dowladdii KMG Awood Milliteri loogala wareegay Talada.
Qoraal uu Bartiisa Twitter-ka soo dhigay Jeffrey Feltman waxa uu ku sheegay inay Tallaabadaasi xagal-daacinayso Bayaankii Dastuuriga ee Xilliga Kala-guurka dalkaasi iyo Rajada Muwaadiniinta Sudan ee Geeddiga Dimuqraadiyada.
Taageeradda Dhaqaale iyo Diplomaasiyadeed ee Maraykanka siiyaan Golaha KMG ee haya Talada dalka Sudan ayaa laha yaabaa in la hakiyey, haddii uu Afgembiga Milliteri meesha ka saaro Xukuumaddii RW Cabdalla Xamduuk.
Previous articleSomaliland oo dad horleh kasoo musaafurineysa degaanadeeda
Next articleMadaxweynaha Puntland oo sheegay in Somalia ka dhici karto doorasho qof & Cod ah